Banyere Anyị - Jiangxi Runquankang Biological Technology Co., Ltd.
Ọrụ ionsụ Workzọ
Igha na Win-Win
Jiangxi runquankang ndu technology co., Ltd. bụ a professinal na-emepụta ọgwụ na ngwaọrụ manufcaturer.The factory emi odude ke ulo oru ogige nke Guantian obodo, Chongyi asị, Ganzhou obodo. The ụlọ ọrụ ka aha isi obodo nke yuan 50, ekpuchi ebe ndị 8,000 square mita, na nwere 99 ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere asọmpi siri ike n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ na mmepụta nke ọgwụ ọgwụ chloramphenicol, DL chloramphenicol, heparin sodium na sweetener sodium saccharin.
Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo usoro njikwa mma zuru oke ma nwee QA a zụrụ azụ, ndị ọrụ njikwa QC na ụlọ ọrụ nyocha dị elu na ụzọ nyocha. Ihe omumu ihe omuma nke ulo oru a eruola asambodo GMP ohuru, ma obu ulo oru mmeputa ihe eji eme ya ma wuo ya dika iwu FDA na EU CEP.
Ndị nwere onyinye
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ R & D siri ike, nke onye isi njikwa anyị Zou Haiping na-eduzi, Zou Haiping bụ nwa akwukwo maka "Puku Puku Puku puku Project" na Jiangxi Province, agadi engineer nke South China University of Technology, doctorate, na onye nnọchianya nke Nke anọ na nke 5 nke ndị mmadụ nke Ganzhou City.
Tumadi na-etinye aka na mmepe na ntinye nke ihe ntụ. O nwere ihe karịrị afọ iri nke ọgaranya ahụmahụ na enterprise mmepụta management. Ọ dị mma na itinye akwụkwọ maka ọrụ sayensị na teknụzụ, ikike ikike ọgụgụ isi, nsọpụrụ na ọrụ ndị ọzọ. Eduzi ma sonye na otutu ulo oru teknụzụ mgbanwe oru ngo, merie nke atọ na-agbata n'ọsọ nke Ganzhou Science na Technology Ọganihu Award, ikike karịa 10 mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ na ihe karịrị 50 na ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ.
R&D & Ngwaọrụ
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike na sayensị nke sayensị na teknụzụ dị ka ihe na-akwọ ụgbọala, nguzobe nke teknụzụ dị elu nke akụrụngwa, wuru usoro ọhụụ teknụzụ zuru oke.
Site onwe ha nnyocha na mmepe, oru imekọ ihe ọnụ na iwebata digestible absorption na ndị ọzọ na ọwa, nọgidere na-akwalite ngwaahịa technology upgrading. Companylọ ọrụ ahụ na-eduga n'ịdị mma ngwaahịa yana teknụzụ mmepụta bụ ọkaibe ọkwa ụlọ, nwere uru asọmpi dị ịrịba ama.
Companylọ ọrụ ahụ guzobere ụlọ ahịa ahịa ngwaahịa na Nanchang, guzobe netwọk ahịa zuru oke, ahịa ahịa n'oge niile India, Pakistan ， Vietnam ， South Korea, United States, Brazil, Spain na ihe karịrị mba 30 na mpaghara.
Jiang runquankang ndu technology co., LTD., N'ịgbaso "na-asụ ụzọ ọrụ, fraternity na mmeri-mmeri" mmụọ nke enterprise, n'ụzọ zuru ezu ịdabere jiangxi mahadum nke ọdịnala Chinese na nkà mmụta ọgwụ mmepụta, mwekota nke sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ n'elu ikpo okwu, mwekota nke oge a nhazi usoro nkesa nke ngwa ahia, na ikpo okwu ahia nke mba uwa, na-eme ka uru nke oru a di elu, ka o buru ulo oru di elu nke na-ebuputa ihe ndi ozo.
Ntak emi Họrọ Anyị？
1.Full ahụmahụ nke nnukwu ọnụ ọgụgụ containers loading na Chinese oké osimiri n'ọdụ ụgbọ mmiri.
2.Oge ngwa ngwa site na mbufe ahia.
3.Page na pallet dị ka arịrịọ pụrụ iche nke onye zụrụ ahịa.
4.Best ọrụ mgbe Mbupu na email.
5.Cargoes ọnụ na akpa ahịa ọrụ dị.
6.Full ahụmahụ maka Singapore, India, Pakistan, Bangladesh, Korea, USA, Brazil na Spain mbupụ.
7. Cargoes foto tupu na mgbe itinye n'ime akpa.
Ihe 8.Raw sitere na Chinese.